Karen Community Association UK: January 2011
Monday, 31 January 2011 09:29
နိုဝင်ဘာလကတည်းက ဖြစ်လာတဲ့ DKBA နဲ့ နအဖ စစ်တပ်မှာ ကရင်ဘက်က ကျဆုံးမှု့ဟာ ၁ဝ ယောက်လောက်တောင်မရှိသေးပါဘူး နအဖ ဘက်က ဘဲ အကျအဆုံးကတော့ သတင်းစာမျက်နှာတွေမှာ များစွာဖော်ပြ ကြတယ်ဆိုတော့ အထွေအထူး မပြောခြင်ဘူး။ ဒီတော့ မောင်မင်းကြီးသား ငတုန်းများက ကရင်တွေကျမသေဘူးလား Super Men တွေလားလို့ စီးဘောက်တကာမှ လိုက်ရေးတာလည်း အားလုံးတွေကျမှာပါဘဲ။
နအဖ စစ်သားနဲ့ ဒီကေဘီအေ ကရင်စစ်သားတွေကို ယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီကေဘီအေ စစ်သားတွေက မျိုးချစ်စိတ်နဲ့ တရားမျှတ မှု့အတွက်တိုက်သလို့ ကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့ လူမျိုး ဘာသာ သာသနာကို ကာကွယ်ဖို့ စစ်ထဲဝင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ နအဖ စစ်သားတွေကတော့ DSA ဗိုလ်သင်တန်း ဆင်းတွေကလွဲရင် တပ်သား တော်တော်များများကတော့ ၁ဝ၉/၁၁ဝ တွေ ကို စစ်သားစု ဆောင်းရေး သူတွေ အတင်းအဓမ္မ ထုနက်ပြီး စစ်ထဲထည့်ထားတာတွေများသလို့ အသက်မပြည့်တဲ့ ခလေးတွေကလည်း ဒုနဲ့ ဒေးဘဲ။
ဒီကေဘီအေ စစ်အင်အား အရေအတွက် က နအဖ စစ်အင်အားနဲ့ ယှဉ်ကြည့်လိုက်ရင် အဆ တစ်ရာလောက်နည်းပါတယ်။ အရေအတွက်ပြောတာ အရည်အချည်းကတော့ ဆီနဲ့ရေလို ကွာတယ်။ နောက်တစ်ခုက နအဖ စစ်သားတွေ ဟာ နယ်မြေကျွမ်းကျင်မှု့ကလည်း မရှိဘူး။ နောက်ပြီး အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ နအဖ စစ်သားလေး ပြောသွားသလိုဆို နအဖ စစ်သားတွေ ရှေ့တမ်းမှာ ထမင်းစားစရာမရှိလို့ ထမင်းမဝကြရှာဘူး။ ဗိုက်ဆာဆာနဲ့ စစ်တိုက်နေကြရမယ်ဆိုရင်တော့ စစ်ပွဲထဲ အာရုံစူးစိုက်မှု့ အပြည့်အဝမရှိနိုင်ဘူး။ ဒီလို ထမင်းမဝလို့လဲ ကရင်တွေဘက်ကို ပြေးလာတွေ့ရတာပေါ့။
ဘာသာရေးနဲ့ပြောရရင်လည်း နအဖ စစ်သားတွေဟာ လူတကာ ကျိန်ဆဲ နေတဲ့ သံဃာသတ် ပြည်သူသတ် ဒေဝဒတ် သန်းရွှေ ရဲ့ကောင်တွေ။ လူစိတ်မရှိတဲ့ ကောင်တွေကို သမာဒေဝ နတ်ကောင်း နတ်မြတ်တွေက ဘယ်လိုလာစောင့်ရှောက်နိုင်မှာလဲ။
ဒီကေဘီအေ စစ်တပ်အင်အားက ကျန်ခဲ့တဲ့ နှစ်က နအဖ နဲ့ တိုက်ပွဲဖြစ်သွားတဲ့ ကိုးကန့် သာသာဘဲရှိပါတယ်။ ကိုးကန့် ကို နအဖ ၃ ရက် တည်းနဲ့ အပြတ်တိုက်သွားပေမဲ့ ဒီကေဘီအေကို နအဖ အခုတိုက်နေတာ ၃ လ ထဲကို ရောက်နေပါပြီ ဒီကေဘီအေ စစ်သားတွေသာ နအဖ စစ်သားတွေ သေသလိုမျိုး အပြိုင်လိုက် သေနေရင် အခုဆိုရင် နအဖ ကိုတိုက်မဲ့ ဒီကေဘီအေ စစ်သားဆိုတာ ရှိမှာတောင် မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သန်းရွှေခွေး လဒူ ငတုန်း များ မစဉ်းစားတတ်ကြဘူး။
Fromm Karen United
Posted by KCA.UK at 10:240comments
ဝေါ်လေ၊ ချောင့်ခက် နဲ့ သင်္ဃန်းညီနောင် ဒီကနေ့ တိုက်ပွဲ အခြေအနေ
နအဖ တပ်တွေဟာ ဝေါ်လေဘက်က အိုကရေ့ထ နဲ့ ကျောက်ခက်နေရာကတွေကို ဒီရက်ထဲမှာ အပြင်းအထန် ထိုးစစ် ဆင်တိုက်ခိုက်လာတာတွေရှိပြီး နအဖ စစ်တပ်ဘက်က အကျအဆုံးများစွာရှိနေပါတယ်။ ချောင့်ခက်နေရာကို ထိုးစစ် ဆင်လာတဲ့တပ်တွေကတော့ စကခ (၁၂) လက်အောက်က ခမရ (၅၄၆)၊ ခမရ (၅၄၈)၊ ခမရ (၅၄၉) နှင့် စကခ (၉) က ခမရ (၃၅၆)၊ ခမရ (၃၅၇) တပ်တွေဖြစ်ပြီး၊ ဝေါ်လေ အိုကရေ့ထ နေရာကို ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်လာတဲ့ နအဖ စစ်တပ် တပ်တွေကတော့ ခမရ (၄၀၁)၊ ခမရ (၄၀၃)၊ ခမရ (၅၈၆) နဲ့ ခမရ (၂၉၉) စတဲ့ တပ်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မနက် ၇ နာရီဝန်ကျင်လောက်က နအဖဘက်က လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ အစပျိုးပစ်ခတ်လာပြီး ၁၀ နာရီခွဲလောက် မှာတော့ မြေပြင်ကနေ ကျောက်ခက်အနီးက ဒီကေဘီအေ တပ်ဖွဲ့တွေ အသင့်နေရာယူပြင်ဆင်ထားတဲ့ တောင်ကုန်းတွေ ကို ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာပါတယ်။ တိုက်ပွဲဟာ ညနေ ၃ နာရီလောက်မှာ နားသွားပြီး နအဖ ဘက်က အကျအဆုံးများ စွာနဲ့ ဖလူးဘက်ကို ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီတိုက်ပွဲမှာ နအဖ ဘက်က အသေ၊ ဒဏ်ရာ အားလုံးပေါင်း ၅၀ လောက်ရှိ နိုင်တယ်လို့ ဒီကေဘီကေ တပ်မဟာ ၅ မှ ဗိုလ်ဆန်းအောင် က အတည်ပြုပြောကြားပါတယ်။
အခု တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ နေရာကို ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့ မနေ့ကလည်း နအဖ တပ်တွေ လာရောက်တိုက်ခိုက်ပြီး အသေ၊ ဒဏ်ရာ အားလုံးပေါင်း ၁၀ ယောက်လောက်ရရှိကာ ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်လို့ ဗိုလ်ဆန်းအောင်က ဆက်လက် ပြောပြပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး အနီးအနား ဆက်စပ်ဒေသတွေက တိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကို ဗိုလ်ဆန်းအောင် က ဆက်ပြောပြ ပါတယ်။
“မနေ့က ည ၈ နာရီခွဲလောက်မှာ ဝေါ်လေ အိုကရေ့ထနားက နအဖ ဗျူဟာကုန်းကို ကျနော်တို့ ဒီကေဘီအေ ဘက်က ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်။ နအဖ ဘက်က ဗိုလ်မှူးအဆင့် အပါ ၆ ဦး ဒဏ်ရာရတယ်။ အဲဒီလူနာတွေကို ဒီကနေ့ပဲ ထိုင်းနိုင်ငံထဲက သယ်သွားတယ် မြဝတီဘက်ကို။ အဲဒါက ဝေါ်လေမှာ ဖြစ်ခဲ့တာ”
ဆက်လက်ပြီး ဒီနေ့ သင်္ဃန်းညီနောင်နားက နအဖ ကားတန်းကို ဒီကေဘီအေ ဘက်က တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ သတင်းကိုလည်း ဆက်ပြောပြပါတယ်။
“ဟုတ်တယ် ဒီနေ့ မနက် ၈ နာရီ ၁၅ မိနစ်လောက် သင်္ဃန်းညီနောင်နားမှာ ကျနော်တို့ဘက် ဗိုလ်မှူးကျော်ပရို ဦးဆောင် ပြီ နအဖ ကားတန်းကို တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။ ကားတစီးချောက်ထဲထိုးကြတယ် နောက်တစီးက လမ်းဘေးမှာ ထိုးရပ်နေ တယ်။ ၆ ဦးသေပြီး ၁၃ ဦး ဒဏ်ရာရတယ်။ ထိခိုက်ဒဏ်ရာထဲမှာ ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိတဲ တယောက်လည်းပါတယ်ကြား တယ်။ ကားနောက်လိုက်နဲ့ ကားမောင်းသူ အရပ်သားနှစ်ဦးလည်း ဒဏ်ရာပြင်းထန်တယ်လို့ သိရတယ်။” လို့ ပြောပြသွား တယ်။
အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးပျက်ပြားပြီး နအဖ စစ်အုပ်စုကို ပြန်လည်တော်လှန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ ဒီကေဘီအေ တပ်ဖွဲ့တွေကို နအဖ ဘက်က ကလေးစစ်သားတွေ၊ အကျဉ်းသားအထမ်းသမားတွေကိုအသုံးပြုပြီး သဲကြီးမဲကြီး အကျအဆုံးများစွာနဲ့ ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိရာ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၂၂ ရက်နေ့နဲ့ ၂၈ ရက်နေ့အတွင်းမှာပဲ နအဖ ဘက်က စစ်သား ၁၂၀ ကျော်သေဆုံးပြီး
Guardian Weekly, Tuesday 25 January 2011 13.59 GMT
Displaced ...aBurmese man atarefugee camp. Photograph: Nicolas Asfouri /AFP Weighed down with 10kg packs of medical supplies – as well as her clothes, food and three young children – Hsa Mu Na sets out from her organisation's headquarters in Mae Sot, Thailand, for five hours by car, four hours by boat and three days by foot toaconflict-plagued region of Burma where medical care would be nonexistent were it not for her and her colleagues. "I have to cross streams, go over mountains and through the jungle to get there. I sleep in villagers' homes along the way," said Hsa Mu Na,a36-year-old ethnic Karen health worker.
Saw P's son, “Saw G,” inaphoto taken on Jan. 1, 2011. Saw G's mother was shot dead 45 minutes after he was born. (PHOTO: KHRG)
They say, “All is fair in love and war.”
But for Karen civilians trapped in the jungle between Burmese government forces and Karen rebels, there is very little sense of fairness in either matter.
Take “Saw P,”a37-year-old villager who recently arrived atatemporary refugee camp in Thailand after leaving his home in Papun District in northern Karen State, which has turned intoawar zones in the last few months.
On the night of Oct. 13, Saw P was tending to his wife who was nine months pregnant with their third child. He tended the fireplace inside the family's humble wooden house whileaneighbor acted as midwife.
No other neighbors or friends were around. Almost the entire village had fled in the preceding days when they heard that the Tatmadaw, or Burmese army troops, had set upacamp nearby.
Saw P's 24-year-old wife gave birth toababy boy. She had the chance to hold her child and name him before she was shot dead.
Posted by KCA.UK at 13:350comments
KNU President's Address on 62nd Anniversary of Karen Revolutionary Resistance Day ( English )
KNU President's Address on 62nd Anniversary of Karen Revolutionary Resistance Day ( English ) -
KNU President's Address on 62nd Anniversary of Karen Revolutionary Resistance Day ( Burmese )
KNU President's Address on 62nd Anniversary of Karen Revolutionary Resistance Day ( Burmese) -
KNU President's Address on 62nd Anniversary of Karen Revolutionary Resistance Day ( Karen )
ချောင့်ခက်ရွာအနီးက သရက်ပင်စခန်းတိုက်ပွဲမှာ ဇန်နဝါရီလ ၁၇ နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဒီကေဘီအေနဲ့ နအဖ တို့ တိုက်ပွဲ မှာ နအဖ ခမရ ၃၅၇ မှ တပ်သား ၁၃ ယောက်သေဆုံးပြီး ၁၇ ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲပြီးတဲ့နောက် နယ်စပ်မှာ ပစ် ခတ်သံတွေ လေးငါးရက်ညိမ်သက်သွားခဲ့ပြီး ဇန်နဝါရီ ၂၃ ရက်နေ့ မနက်စောစောကစလို့ တိုက်ပွဲသံတွေ ဖလူးနဲ့ ဝေါ်လေ တလျောက်မှာ ပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။
ဇန်နဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့ မနက် ၆ နာရီလောက်ကစပြီး နအဖ စစ်တပ်မှ စကခ (၁၂) လက်အောက်ခံ တပ်ရင်းတွေဖြစ်တဲ့ ခမရ (၅၄၈)၊ ခမရ (၅၄၉) တပ်တွေနဲ့ ဒီကေဘီအေ ကလိုထူးဘော ဗျူဟာမှူး ဗိုလ်မှူးကျော်သက် ဦးဆောင်နေရာယူ ထားတဲ့ ချောင့်ခက်အနီး ဘောသိုပူကျိုးနဲ့ ချောင့်ခက်ကြား နေရာကို ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ နအဖ ဘက်မှ စစ်သား သေဆုံးသူ ဒဏ်ရာရသူ အားလုံးပေါင်း ၂၀ ယောက်ခန့် ရှိပြီး ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့တယ်။ ညနေပိုင်းအထိကို လက် နက်ကြီးတွေနဲ့ နအဖ ဘက်က ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ ဒီကေဘီအေ တပ်မဟာ ၅ မှ ဗိုလ်ဆန်းအောင် က ပြောပြပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ နေရာကို ထောက်ကူပစ်ခတ်နေတဲ့ နအဖ ဝေါ်လေဗျူဟာကုန်းမှ လက်နက်ကြီး ကျည် မတော်တဆပေါက်ကွဲမှုဖြစ်လို့ နအဖ လေးဦးသေးဆုံးသွားပြီး သေဆုံးတဲ့အထဲမှာ တပ်ရင်းအရာရှိတယောက် ပါတယ်လို့လည်း သတင်းရရှိပါတယ်။
ဒီတနေ့ထဲမှာပဲ ဝေါ်လေ အိုကရေ့ထ နေရာမှာ ဒီကေဘီအေဘက်မှာ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ နအဖ သုံးဦး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါ တယ်။
ဖလူးဘက်မှာတော့ ဒီကေဘီအေ ဗိုလ်ကျော်သက် ဦးဆောင်တဲ့ တပ်ဖွဲ့တွေက နအဖ စစ်ကြောင်းကို ခြုံခိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ နအဖ တပ်သား ၂ ဦး သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
ဒီရက်ပိုင်းထဲမှာ မြဝတီမြို့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှုတွေကို တင်းကျပ်စွာပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ ဇန်နဝါရီ ၂၃ ရက်နေ့က ဘားအံမြို့ကနေ မြဝတီဘက်ကို စစ်သားအပြည့်တင်ထားတဲ့ စစ်ကား ၁၅ စီး ထွက်သွားတယ်လို့ ကိုယ် တိုင်တွေ့ရှိရတဲ့ ဘားအံမြို့ခံတဦးက ပြောပြလို့ သိရှိရပါတယ်။
Posted by KCA.UK at 14:040comments
၀ါရင့်ကရင်နီခေါင်းဆောင် ခူးထဲဘူးဖဲ ကျန်းမာရေးကြောင့် ဆေးရုံတင် ကုသနေရ
Posted by KCA.UK at 23:470comments
နယ်စပ်တိုက်ပွဲများမှာ အကျဉ်းသား ပေါ်တာများကို စစ်တပ်က ပစ်သတ်
Posted by KCA.UK at 22:480comments
KNU အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဆရာမစီပိုးရာစိန် မှ UK နိုင်ငံရှိ ကရင်လူထုအပါအဝင် ကရင်လူမျိုးအားလုံးသို့ နှစ်သစ် နှုတ်ခွန်းဆက်စကား
Posted by KCA.UK at 14:160comments
အခုရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာ ဒီကေဘီအေနဲ့ နအဖ တပ်တွေရဲ့ တိုက်ပွဲတွေဟာ ဆက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေပြီး နအဖ ဘက်က အင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ ဖြန့်ခွဲအသုံးပြုတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီနေ့မှာဆိုရင်လည်း အုံးဖန်နဲ့ ကလော့ထော့ အနီးက ချူကလီရွာနားမှာလည်း ဇန်နဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့ မနက် ၈ နာရီက တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒီကေဘီအေ တပ်ဖွဲ့တွေက ချုကလီရွာအနီးမှာ နအဖ တပ်တွေကို စောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး နအဖ ဘက်က ၈ ယောက် သေဆုံတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်နေ့ လေးဒေး နေရာမှာဖြစ်တဲ့ တိုက်ပွဲမှာလည်း နအဖဘက်က ထိခိုက်သေဆုံး ၅၀ ရှိခဲ့ပြီး အဲဒီထဲကမှ ၂၀ ယောက်ဟာ ဒဏ်ရာပြင်းထန်ရခဲ့တဲ့ အပြင် အကျဉ်းသားတွေကို အထမ်းသမားအဖြစ်နဲ့ခေါ်လာခဲ့တဲ့ သူတွေထဲက ၆ ဦးလည်း သေဆုံးခဲ့တယ်လို့၊ သိရပါတယ်။ ဒီကေဘီအေဘက်က တဦး ဒဏ်ရာနဲ့ ၁ ဦး ကျဆုံးခဲ့ပါတယ်။
အခု နအဖ ရဲ့ ထိုးစစ်အတွင်းမှာ နအဖ စစ်သားအင်အား အလုံးအရင်းနဲ့သုံးတဲ့အပြင် အင်းစိန်၊ မော်လမြိုင်၊ ဘားအံတောင်ကလေးက အကျဉ်းသားတွေကို လူသားမိုင်းရှင်းအဖြစ်ရယ် အထမ်းသမားအဖြစ်ရယ်ပါ တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနေတာတွေကို ယခုဖြစ်နေတဲ့ ဝေါ်လေ နဲ့ ဖလူးဒေသက နအဖ ထိုးစစ်တွေမှာ တွေ့မြင်ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။
Posted by KCA.UK at 08:020comments
For more information please contact Saw Eh Htee Kaw +447861786539 or Saw Taw Zan +447948218474
Posted by KCA.UK at 17:390comments